व्यक्तित्व – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १०:३४ 0
फितलो अध्यादेश : न ‘बुहारी’ को माग पूरा भयो, न एनआरएनको
मनोज गजुरेलको निषेधाज्ञा डायरी : खै कसलाई पो उडाउने ?
फरक क्षमताका व्यवसायी एनिलराज : जो लोकसेवा भिडेर शिक्षक बन्न चाहन्छन्…
भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन…
२६ कात्तिक, काठमाडौं । समाजवाद उन्मुख हाम्रो देशको एउटा चेहरा पछिल्लो समय खुलामञ्चमा उद्घाटित छ । कुनै समय तत्कालीन माओवादीले हजारौं जनता बटुलेर क्रान्ति सफल भएको उद्घोष गरेको यो मञ्चमा अहिले एक गाँस तातो भातका लागि भौतारिँदै गरिबहरु थाल…
टेक्सासमा ट्रम्पलाई महत्वपूर्ण सफलता
१९ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडनमाथि टेक्सासमा महत्वपूर्ण जित हासिल गरेका छन् । राष्ट्रपतिको दौडमा निर्णायक मानिएको यो राज्यमा जित हात पारेसँगै…
चिनियाँ अर्बपति ज्याक माको १५ सुझाव, कसरी धनी र सफल बन्ने ?
विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरू जीवनमा कसरी सफल हुन्छन् । एउटै धरातलबाट उठेका कोही अर्बपतिको सूचीमा विश्वभरि चर्चित हुन्छन् भने कोही किन गुमनाम हुन्छ ? आफूले आफ्नो जीवनलाई जिउने र त्यसको मूल्य बुझ्ने र नबुझ्नेमा यो भिन्नता हुन्छ ।…
खराब खानपान, जीवनशैली र पर्यावरणको कारण हाम्रो शरीरमा विभिन्न विकार जम्मा हुन्छ । यही विकार हो, शरीरमा रोग पैदा गर्ने । हामीले खाएका सबै खानेकुरा ताजा, सुपाच्य हुँदैनन् । त्यसमाथि चिल्लोचाप्लो, मसलेदार खानेकुरा, जंकफूड, मदिराजन्य पेय…
३० साउन, काठमाडौं । कलम बलियो कि तरबार ? एक जमानामा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई वादविवाद खेलाइँदा ‘ट्रेन्डिङ टपिक’ यही हुन्थ्यो । सायद अहिले पनि हुन्छ होला । हास्यव्यंग्य कलाकार सुवोध गौतमले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीको भोगाइबाटै ‘तरवार’…